Disability Rights Ohio - Mudnaanta Barnaamijyada
Sanad-maaliyadeedka Federaalka 2019 Mudnaanta Barnaamijyada
Disability Rights Ohio waa hay’ad aan faa’iido doon ahayn oo leh hadadka u-doodida xuquuqda aadanaha, madaniga, iyo xuquuqda sharciga ee dadka naafada ah ee ku nool Ohio.
Waxaanu dooneynaa inaanu fulino hadafkan iyada oo loo marayo noocyo badan oo u-doodid ah oo ay ka mid yihiin: u-doodista nidaamsan, gaarka ah, siyaasadda iyo, haddii loo baahdo, iyada oo loo marayo nidaamka sharciga. Disability Rights Ohio waxay ku dadaalaysaa inay taageero siiso dad badan intii suuragal ah. Si aan u kordhino saameynta aan la leenahay iyadoo adeegsanayno ilaha la heli karo, waxaanu raadineynaa talooyinka beesha sanad walba si aan diiradda u saarno arrimaha mudnaanta leh si aan u yeelan karno saameynta ugu waxtarka badan.
Disability Rights Ohio waxay qiyaasayaan bulsho ay dadka naafada ah ay ka yihiin xubno buuxa oo la siman dadka kale.
Bulsho ay dadka naafada ah ku raaxaystaan xuquuqda iyo fursadaha dadka kale oo dhan leeyihiin, gaar ahaan hanaanka doorashooyinka.
Sanadkan, Disability Rights Ohio waxay:
Ka shaqeyn doontaa inay siiso macluumaad iyo taageero cod-bixiyeyaasha ama dadka doonaya inay cod-bixiyaan doorashada Nofeembar 2018, oo ay ku jirto u xilsaarida shaqaale taleefoonka degdega ah Maalinta Doorashada;
Iyadoo la sugayo doorashada guud ee 2018, ku hawlanaan doonaan u-doodista nidaamsan si loo ilaaliyo xuquuqda codbixinta shakhsiyaadka isbitaalada ku jira Maalinta Doorashada oo awgeed ay u diidaan helitaanka sanduuqa cod-bixinta saraakiisha degmada iyo gobolka
Qaad talaabooyin si aad u hubiso helitaanka macluumaadka codbixinta iyo in geedi-socodka diiwaangelinta iyo cod-bixinta uusan takoor lahayn oo ay heli karaan dhammaan
Bulsho ay dadka naafada ah ay is-hagaan.
Disability Rights Ohio waxay:
Taageeri doontaa dadka u dooda xuquuqdooda si ay u xoojiyaan codkooda iyo ururada ay leeyihiin;
Sii wadi doontaa shaqada si loo ballaariyo taageerada go’aan gaarista iyadoo ah beddelka ma’suulnimada, iyo in la fuliyo isbeddelada loo baahan yahay ee adeegyada ilaalinta ee Ohio iyo nidaamka ilaalinta.
Bulsho ay dadka naafada ah go’aan ka gaarayaan halka ay ku noolaan doonaan, sida ay u noolaan doonaan iyo qofka ay la noolaan doonaan.
Sixi doontaa takoorka guriyeynta ee goobaha ay ka jirto cabasho nidaamsan halkaasoo siyaasadaha ama habdhaqanada ay ku yihiin caqabad isdhexgalka buuxa ee bulshada dhexdeeda;
Wax ka uga qaban doontaa wadashaqeynta lala leeyahay adeegyada sharciga iyo guriyeynta kale sida arrimo ugu muhiimsan ee la xiriira naafanimada iyo saboolnimada si kor loogu qaado helitaanka guryo wanaagsan, ammaan ah, la heli karo, oo qiimo jaban;
Baari doona oo wax ka qaban doona kiisaska la xushay ee kalasaarka aan loo baahneyn ee dadka ku jira xarumaha kalkaalinta ama khatarta ah in la dhigo xarunta lakaalinta, oo ay ka mid tahay soo sheegidda hirgelinta Dib-usoo-kabashada Bulshada u Baahan, qiimeynta guulaheeda (oo ay ku jirto saameynta shakhsiyaadka), meelaha wanaajinta u baahan, iyo istaraatiijiyadaha xeeladaysan si loo hagaajiyo fulinta;
Muddaacin doonaa kiiska Ball v. Kasich, kaas oo u baahan doona in Ohio ballaariso fursadaha adeegyada iyo taageerada muddada dheer ee bulshada iyo shaqooyinka tartanka leh oo isku dhafan;
Iyagoo ka samaynaya isbahaysi iyo matalaad xaaladaha gaarka ah, qaadi doonaan talaabooyin lagu xaqiijinayo
nidaamyada adeegyada muddada-dheer iyo taageerooyinka dadka naafada ah in ay leeyihiin awood ku filan si ay u daboolaan baahiyaha dadka leh baahiyaha adeegyada kala duwan iyo sare,
bixiyeyaasha adeegga in magdhow lagu siiyo sicir hubinayo qorista iyo haynta shaqaalaha aqoonta leh, iyo
qalabka u qalmashada iyo qiimeynta in aysan u xaddidayn adeegyada qaab khatar gelin kara caafimaadka iyo badqabka dadka qaata lacagta caymiska;
Iyadoo lala kaashanayo Xarumaha Baxnaanada Madaxbanaan, Golaha Naafonimada Korriinka, iyo daneeyayaasha kale, in la sii wadi doono qiimeeynta helitaanka gaadiidka, kuwa gobolka iyo kuwa gobolada kale aada labadaba, dadka naafada ah luugu talagalay.
Bulsho ay dadka naafada ah go’aan ka gaarayaan halka ay wax ka bartaan.
Inay qaadi doonaan talaabooyin lagu xalliyo takoorka ka dib waxbarashada dugsiga sare waxayna hubinayaan in meeleynta ku habboon loo fidiyo shaqsiyaadka uqalma;
Iyadoo xoogga la saarayo hirgelinta qaybta 511 ee Xeerka Fursadaha Shaqaalaha ee Maalgelinta, kormeeri doonaan hirgelinta shuruudaha kala-guurka cusub iyo ku lug lahaanshaha u-doodista tooska ah ee sharciga ah ee kiisaska la xushay si looga guuleysto caqabadaha kala-guurka;
Muddaacin doonaa kiiska Doe v. Ohio si loo hubiyo in ay helaan waxbarasho tayo leh oo isku dhafan ardayda naafada ah ee dhigata dugsiyada Ohio;
Inay sii wadi doonaan iyagoo bahaysanayo u-doodadayaasha waalidka iyo ardayda si loo baaro hirgelinta sharciyada gobolka ee xakameynta iyo asturnaanta ardayda; warbixinta dugsiyada; iyo hirgelinta ama dadaalada kale u hoggaansanaanta ee gobolka;
Inay qaadi doonaan tallaabooyin wax looga qabanayo diidmada waxbarashada ee goobaha hay’adaha, oo ay ku jiraan xarumaha daaweynta ee guryaha iyo xarumaha xabsiyada dhalinyarada;
Wax ka qabashada cadaalad darada nidaamsan ee nidaamka waxbarashada loogu talagalay ardayda naafada ah si loo hagaajiyo taageerada caafimaadka maskaxda ee dugsiyadeena iyadoo hoos loo dhigayo jawaab-celinta caddaaladda Debiyada ee dabeecadaha la xariira naafonimada.
Hirgelinta iyo taageeridda Barnaamijka Waxbarashada Gaarka ah ee Ingram White Castle (White Castle Special Education Fellow program).
Bulsho ay dadka naafada ah go’aan uga gaarayaan halka ay ka shaqeynayaan.
Sii wadista hawlaha si loo dhammeeyo takoorka bixinta ruqsadaha iyo habdhaqanada kale ee ka reebayo codsadayaasha iyo xirfadlayaasha uqalma shaqada;
Sii wadida natiijo guuleysiga ee arrinta Seneca Re-Ad, ka faa’idaysiga xalalka dheeraadka ah iyaga oo wakiil ka ah shaqsiyaadka ka shaqeeya goobaha shaqo oo aan isku dhafanayn, oo ay ku jiraan mushaarka ugu yar iyo suurtogalnimada meeleynta lagama maarmaanka u ah joojinta takoorka;
Iyadoo loo marayo Barnaamijka Taageeridda Macmiilka
Kala qaybqaadashada Golaha Baxnaanadda ee Gobolka si loola socdo loona wadaago hawlaha baxnaanadda xirfadeed ee gobolka (Vocational Rehabilitation, VR),
Qiimeynta habdhaqanada jira ee maamulka Baxnaanada Xirfadeed si loo kordhiyo natiijooyinka macaamiisha gaarka ah, qaas ahaan marka heerarka ku cad sharciga federaalka su’aal ka taagan tahay, helitaanka tababar shaqo iyo tacliin sare, iskaa u shaqeysasho, iyo marka macmiilku yahay dhalinyaro ka baxayo da’da qaangaarka;
Muujinta matalaadda marka qofku qayb ka yahay dib ugu noqoshada barnaamijka shaqada oo uu raadsanayo inuu ama ku sii nagaado shaqada oo la kulmo takoorka shaqada ama diidmada meeleynta macquulka ah
Bulsho dadka naafada ah ay xor ka yihiin xadgudubka, dayaca, iyo dhiig-miirashada.
La socoshada xarumaha iyo hay’adaha kale ee sharciyaysan kuwaasoo dadka naafada ah lagu go’doomiyo oo lagu kala sooco;
Raadinta istiraatijiyada lagu xallin karo xadgudubka, dayaca, iyo xadgudubka xuquuqda aadamaha ee xarumaha daaweynta iyo xarumaha kale;
Dib-u-eegida warbixinnada iyo cabashooyinka ku saabsan xadgudubka ama dayacaadda iyo baaritaanka haddii lagama maarmaan tahayna la hubiyo in nidaamyada iyo shakhsiyaadka lala xisaabtamo, isbeddel siyaasadeed la sameeyo, iyo in dadka naafada ah ay badqabaan;
Ka qayb qaadashada u doodista isbeddel siyaasadeed oo nidaamsan si loo kordhiyo helitaanka daaweynta caafimaadka maskaxda iyo in la saxo xadgudubyada nidaamsan ee xuquuqda aadanaha, iyada oo diiradda la saarayo daaweynta bukaanka baaritaanada dembi ee ku jira isbitaalada gobolka Ohio, daryeelka caafimaadka maskaxda ee ku filan maxaabiista ku jirta xabsiyada Ohio, iyo daaweynta cunteed ee carruurta ku jirta xarumaha hoyga daaweynta dhallinyarada iyo iyadoo la kaashanayo khabiir, la qiimeyo oo la raadiyo istiraatijiyadaha lagu tirtiro xadgudubyada nidaamsan iyo kor u qaadista isdhexgalka bulshada sida ku cad Cinwaanka II ee ADA;
Qiimeynta oo ku lug yeelashada awoodda maamul-dowladeed si ay wax looga qabto guuldareysiga heerarka siyaasadeed si ay si wax ku ool ah ula xiriiraan ama haddii si kale loo dhigo u meeleeyaan dadka naafada ah inta lagu jiro isdhexgalka ay la leeyihiin fulinta sharciga.
Disability Rights Ohio waxay sidoo kale:
Qaaditaanka tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah fulinta xeerka helitaanka sida ku cad sharciga federaalka iyo gobolka loogu talagalay shakhsiyaadka iyo diiwaanadooda;
Siinta macluumaadka iyo waxbarashada ku saabsan siyaasadaha naafonimo iyo arrimaha sharciyeed ee kala duwan saraakiisha la doortay ee gobolka, degaanka, iyo federaalka;
Qabashada wacyigelinta iyo tababbarka dadka naafada ah, qoysaskooda iyo bixiyeyaashooda, oo ay ka mid yihiin hawlgal lacag ah oo loogu talagalay xafiiska adeegga bulshada.
Marka loo geeyo u-doodista nidaamsan, Disability Rights Ohio waxay sii wadi doontaa dhisidda awoodda “albaab qaabilaadda” iyadoo:
La Bixinayo macluumaad xoogan iyo talooyin si loo caawiyo dadka naafada ah si ay isu-difaacaan;
Arrimaha ku saabsan naafanimada kuwaasoo mudnaanta waaranka kiiska, bixinayo wakiilnimo xaddidan si loo xalliyo khilaafka fursadda ugu horayso ee suurtagalka ah. Xal degdeg ah ee arrinta sharciga ayaa u badbaadisa dhammaan dhinacyada waqti iyo lacag, waxayna u oggolaanaysaa macmiilka inuu helo adeegyada ama macaashka loo baahan yahay xilli hore, iyada oo laga fogaanayo daahis iyo halista dacwad maxkamadeed sii dheeraatay.